Madaxweynaha dalka oo saxiixay saddex hindise sharciyeed | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo saxiixay saddex hindise sharciyeed
Madaxweynaha dalka oo saxiixay saddex hindise sharciyeed
Madaxweynaha dalka Mr.Uhuru Kenyatta ayaa maanta qalinka ku duugay ilaa saddex hindise sharciyeed oo uu u soo gudbiyay baarlamaanka.
Shuruucdan ayaa ku saabsan qaxootiga , adeegga dibadda iyo isbeddel lagu sameeyay xeerarka la wareegidda talada dalka.
Xeerka arrimaha qaxootiga oo uu horay madaxweyne Kenyatta dib ugu celiyay baarlamaanka ayaa mar kale lagu wareejiyay waxaa uuna xoojinayaa maareynta qaxootiga iyadoo la adeegsanayo shuruuc caalami ah.
Xeerka labaad ayaa ah mid ku saabsan in la soo dhiso akadeemiyada adeegga dibadeed iyo qodobbo kale oo lagu wanaajinayo xiriirka ay Kenya la leedahay wadamada kale ee caalamka.
Xeerka saddexaad ee uu maanta saxiixay Mr. Kenyatta ayaa waxaa baarlamaanka hor geeyay mudanaha deegaanka Homa Bay Town Peter Kaluma waxaana looga gol-leeyahay in la isku duba rido qaab loola kala wareegayo talada dalka marka uu dhamaado muddo xileedka mas’uulka hoggaanka haya.
Madasha uu madaxweynaha dalka ku saxiixayay xeerarkan waxaa goobjoog ka ahaa madaxa waaxda adeegga dadweynaha Joseph Kinyua, guddoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi, karaaniga golaha qaran ee xeer dejinta Michael Sialai, qareenka dowladda Ken Ogeto iyo ku xigeenka madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka Njee Muturi.
Previous articleIn ka badan 6 milyan oo laga tallaalay COVID19
Next articleBarayaasha culuunta caafimaadka ee jaamacadda Moi oo shaaciyay digniin shaqo joojin ah